Le Glacier : nafana ny fihaonan’i Nina’s tamin’ny mpankafy | NewsMada
Le Glacier : nafana ny fihaonan’i Nina’s tamin’ny mpankafy
“Noravana fotsiny ny fiarahana fa tena nalai-nisaraka ny roa tonta”, hoy ny nambaran’ny mpikarakara ny tarika Nina’s. Fantatra mantsy fa tena nafana, ary nifanitsa-kitro ny tetsy amin’ny Le Glacier Analakely ny alin’ny zoma lasa teo. Nandritra ny seho nampitondraina ny anarana hoe “Atterissage”, izay notontosain’ny tarika Nina’s io.
Taorian’ny fihodinana nataon’i Nina’s sy ny tariny tany Frantsa io seho eo. Avy dia ilay hira vaovao “Mankasitraka” ny nanokafany ny seho, ary tsikaritra fa efa voarain’ireo mpankafy sahady izany. Toa izany koa ireo hira vaovao hafa toy ny “Solonao vaovao”, “Malagasy iray”, sns. Na izany aza, ireo hira nampalaza an’i Nina’s hatramin’izay no tena nandrasan’ny maro.
Tsy foana mihitsy ny fandihizana hatramin’ny nisarahana, noraisin’ireo mpankafy tamin-kafaliana avokoa na hira mihetsika na hira milamina. Hihazo an’i Taolagnaro indray i Nina’s sy ny tariny amin’ity faran’ny herinandro ity.